လူလို့ ဆိုရမယ့် မျိူးစိတ်တွေရဲ့ ရှေးဦးအစလက်ရှိလူသားနဲ့ မျောက်ဝံ၊လူဝံ တို့ မတိုင်မီလို့ ဆိုရ
မယ့် ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေဟာလွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၇-၃၈ခုနှစ်လောက်ကတည်းက အာရှ
တိုက်မှာအလုံးအရင်းနဲ့ ကိုနေထိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စူးစမ်းလေ့ လာနေကြသည့် ရှေးဟောင်းသုတေသီပညာရှင်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ဟာ
ရှေးဦး၊ ကမ္ဘာဦးလူသားတို့ မတိုင်မီထိုထက်ပိုမိုေ၇ှးကျသည့် လူသားမျိူးစိတ်တစ်ခု၏ ကျောက်
ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသွားများကိုတွေ့ ရှိခဲ့ ကြပါတယ်...
အဆိုပါကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသွားများဟာ လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင်တွေ့ ရှိခဲ့ သည့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်
ကြွင်းများနှင့် ဆင်တူဖြစ်လို့ အာဖရိကနှင့် အာရှတိုက်အတွင်းရှေးဦးလူသားအစနှင့် ပတ်သက်
သည့် သမိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်ပေးနိုင်မည့်ကွင်းဆက်တစ်ခုအဖြစ်တွေ့ ရှိလာခဲ့ ရပါတယ်...
အနည်ကျကျောက်လွှာများတွင်တည်ရှိနေသည့် အဆိုပါကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများအား ၆ နှစ်
ကျော်ကာလအတွင်း ရှာဖွေခဲ့ ကြရာတွင် ရှေးဦးလူသားတို့ ရဲ့ သွား ၄ ခု ကိုတွေ့ ရှိခဲ့ ကြတာဖြစ်
ပြီး အဆိုပါတွေ့ ရှိချက်ကြောင့် ကမ္ဘာဦးလူသားတို့ ရဲ့ အစဟာ အာရှတိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အ
ရေခြား၊မြေခြား၊ မိုင်ပေါင်းသိန်းသန်းချီကာခြားပေမယ့် ကမ္ဘာဦးလူသားတွေဟာ
အာရှတိုက်ကမှတစ်ဆင့် တစ်ခြားဒေသတွေဆီ ရွေ့ ပြောင်းအခြေချခဲ့ တာဖြစ်
A team of palaeontologists in Myanmar has found the tooth ofapre-human ancestor - afrasia djijidae, so-called because it formsamissing link between Africa and Asia - that is very similar another early ancestor found in Libya
နှစ်ပေါင်း ၃၇ သန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသွား ကြောင့် ကမ္ဘာဦးရှေးဦးလူသား
ဘိုးဘွားဘီဘင်တို့ ဟာ အာရှတိုက် ( မြန်မာနိုင်ငံလို့ ခေါ်ရမယ့် ဒေသမှာ ) အရင်ဆုံးနေထိုင်
ခဲ့ ကြတာဖြစ်ပြီး တစ်ရွေ့ ရွေ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဆင့် ကဲဖြစ်စဉ်အရ အာဖရိကတိုက်ဆီသို့ 
နောက်ပိုင်းတွင် ပြောင်းရွေ့ အခြေချနေထိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
ဒီတွေ့ ရှိမှုကြောင့် လူသားအစ မြန်မာက ( အာရှက ) လို့ တောင်အခိုင်အမာကြွေးကျော်
လို့ ရခဲ့ ပါပြီ....
The 37-million-year-old tooth proves that early human ancestors lived in Asia, and only moved to Africa fairly late in the process of evolution - the latest inaseries of discoveries that have 'sealed' Asia as the starting point for our species
လူသားမျိူးနွယ်စုအစ ဆင့် ကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်....
မြန်မာပြည်မှာတွေ့ ရှိရတဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသွားမျိူး လစ်ဗျားမှာလည်းတွေ့ ရှိခဲ့ ကြ
The human family tree: A team of palaeontologists in Myanmar has found the tooth ofapre-human ancestor - afrasia djijidae, so-called because it formsamissing link between Africa and Asia. It is very similar another early ancestor found in Libya
" အခုတွေ့ ရှိတဲ့ အာဖရေးရှားကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း ဟာရှေးဦးလူသားမျိူးစိတ်အနေဖြင့် အာရှ
ဒေသမှာ စတင်ခဲ့ ပြီးထိုမျိူးစိတ်များ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် အာဖရိကဒေသသို့ မည်သည့် အချိန်
တွင်ရွေ့ ပြောင်းခဲ့ ကာ ထိုကမှတစ်ဆင့် မျောက်ဝံနှင့် လူသားမျိူးစိတ်များအထိဆင့် ကဲဖြစ်စဉ်
ဖြင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့ သည်ကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ ပါပြီ..." လို့ ကာနေဂျီသဘာဝသမိုင်းပြတိုက်မှ
ရှေးဟောင်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင် ခရစ်စ်ဘီအာ့ ဒ် ကပြောကြားခဲ့ 
၎င်းဟာ ပွိုက်တီးယားတက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်များပါဝင်သည့် နိုင်ငံတစ်ကာလေ့ လာရေးအ
ဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ နှင့် အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အာဖရေးရှ ဟာ ကျွန်တော်တို့ ရှေးဦးလူသားမျိူးစိတ်တို့ ရဲ့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေအာဖရိကဒေသ
ကိုရွေ့ ပြောင်းခဲ့ တာကိုပြသနိုင်ခဲ့ တဲ့ ပထမဦးဆုံးသောသက်သေပြနိုင်တဲ့ အချက်မို့ ဒီဖြစ်စဉ်တစ်
ခုလုံးအတွက် အဓိကကျတဲ့ အပြောင်းအလဲဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်....
မရှိခဲ့ ယင် ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး...
ရှေးဟောင်းရုပ်ကြွင်းဆိုင်ရာသုတေသီပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ကတော့ မည်သို့ မည်ပုံ၊ မည်သည့်
အချိန်တွင် ထိုကမ္ဘာဦးရှေးဟောင်းလူသားမျိူးစိတ်များ အာရှဒေသမှ အာဖရိကသို့ ရွေ့ ပြောင်း
အခြေချခဲ့ ကြသည်နှင့် ပါတ်သက်၍မူ အမျိူးမျိူးအဖုံဖုံသဘောထားကွဲခဲ့ ကြပါတယ်....
တက်သိုင်းပင်လယ်ဟု ယခုခေတ်ခေါ်တွင်နေကြသည့် မြေထဲပင်လယ်ကြီးက အာဖရိကနှင့် ယူ
ရိုအေးရှားဒေသကို ခွဲခြားထားခြင်းကြောင့် ထိုသို့ အုပ်စုလိုက်ရှေးဦးလူသားများရွေ့ ပြောင်းခြင်း
ဟာ အလွန်တရာမှခက်ခဲမည့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်....
အာဖရေးရှားရုပ်ကြွင်းများတွေ့ ရှိမှုကြောင့် ရှေးဦးလူသားမျိူးစိတ်များအာဖရိကသို့ မည်သည့် 
လမ်းကြောင်းဖြင့် ရွေ့ ပြောင်းရောက်ရှိသွားသည်ဆိုသည့် အချက်ကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ့် ထိုအာ
ငယ်အတွင်း ရောက်ရှိခဲ့ ကြသည်ကိုတော့ ခန့် မှန်းနိုင်ခဲ့ ကြပါတယ်..... (ထိုကာလထက်ပိုမစော
ကမ္ဘာဦးလူသားအစ မြန်မာကလို့ ကြွေးကြော်နိုင်အောင် နိုင်ငံတကာပညာရှင်များအဖွဲ့ 
က ဒီလိုလေ့ လာစူးစမ်းရှာဖွေခဲ့ ပါတယ်....
Not only does Afrasia help seal the case that anthropoids first evolved in Asia, it also tells us when our anthropoid ancestors first made their way to Africa, where they continued to evolve into apes and humans,¿ says Chris Beard, Carnegie Museum of Natural History palaontologist
ရှေးဦးလူသားမျိူးစိတ်တို့ ရဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသွားများ....
နှစ်ပေါင်း ၃၇ သန်းသက်တမ်းရှိ မြန်မာ့ အာဖရေးရှ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသွားဟာ အဖရိုတာစီး
ယပ်စ် လီဘိုင်ကပ်စ် ဟုခေါ်သည့် သက်တမ်းတူမြောက်အာဖရိကသမိုင်းဦး နို့ တိုက်သတ္တ၀ါရှေး
ဦးလူသားမျိူးစိတ် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသွားများနှင့် ဆင်တူနေတာကိုက ထူးခြားလှပါတယ်...
ထိုမြန်မာ့ ရှေးဟောင်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသွားများကိုမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ညောင်ပင်လယ်
အနီးတွင် ၆ နှစ်ကြာ အနည်ကျကျောက်လွှာတန်ပေါင်းများစွာအား စေ့ စပ်သေချာစွာတူးဖော်
လေ့ လာတွေ့ ရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
များဟာ အင်းဆက်ပိုးများကို စားသောက်နေထိုင်ခဲ့ တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်....
ထိုသွားများရဲ့ အရွယ်အစားကလည်း ထိုမျိူးစိတ်များရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ၃.၅ အောင်စရှိ
မှာမို့ မလေးကျွန်းဆွယ်ရှိမျောက်ဝံမျိူးစိတ်တိရိစ္ဆာတစ်ကောင်ခန့် နီးပါးအလေးချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်...
" အာဖရိကတိုက်ကတွေ့ ရှိခဲ့ ရတဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကောက်ချက်ချ
ယူဆနိုင်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အခက်တွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်...
ရှေးဦးနို့ တိုက်သတ္တ၀ါလူသားမျိူးစိတ်များ မြန်မာနှင့် လစ်ဗျားနိုင်ငံဒေသများမှာ အချိန်ကာလ
အတူတူနီးပါးနေထိုင်ခဲ့ တယ်ဆိုတဲ့ အချက်က အာဖရိကရှေးဦးလူသားမျိူးစိတ်တို့ ရဲ့ ဆင့် ကဲဖြစ်
စဉ်တိုးတက်မှု ကွာဟချက်ဟာတစ်ကယ့် ကိုမှန်ကန်ခဲ့ တယ်ဆိုတာဖော်ညွှန်းခဲ့ ပါတယ်...
လစ်ဗျားမှာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများမတွေ့ ခင်အချိန်အထိ ရှေးဦးလူသားများ အာဖရိကဒေသ
ကိုမေ၇ာက်ရှိခဲ့ ကြသေးဘူးဆိုတာမှန်ကန်ခဲ့ ပါတယ်..." လို့ အဆိုပါလေ့ လာရေးအဖွဲ့ ခေါင်း
ဆောင်လည်းဖြစ်၊ ကာနေဂျီပြတိုက်တွဲဖက်သုတေသနပညာရှင်လည်းဖြစ်သည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊
ပွိုက်တီးယားတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ ဂျင်းဂျက်ကပ်စ်ဂျယ်ဂါ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကမ္ဘာဦးရှေးဦးလူသားတို့ ရဲ့ ဘိုးဘွားဘီဘင်များလို့ ဆိုရမယ့် ရှေးဦးနို့ တိုက်သတ္တ၀ါလူသားမျိူး
စိတ်များရဲ့ အစကို သုတေသနပြုရှာဖွေနေခဲ့ ခြင်းဟာ ယနေ့ ခေတ်သစ်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း
သုတေသနပညာရပ်ရဲ့ အဓိကရည်မှန်ချက်ဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်....
အဖရေးရှ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေ့ ရှိမှုက ရှေးဦးလူသားမျိူးစိတ်တစ်စု လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်သန်း
ပေါင်း ၃၇-၃၈ နှစ်က အာဖရိဒေသတွင်စိုးမိုးနေထိုင်ခဲ့ တယ်ဆိုတာဖော်ပြခဲ့ ပေမယ့် လစ်ဗျားနိုင်
ငံတွင်တွေ့ ရှိခဲ့ သည့် အဖရိုတာစီးယပ်လီဘိုင်ကပ်စ် ရုပ်ကြွင်းများကြောင့် အဆိုပါရှေးဦးလူသား
မျိူးစိတ်များရဲ့ အခြေအနေအကြောင်းတရားအမှန်ကတော့ ပိုမိုခက်ခဲနက်နဲရှုပ်ထွေးလှပါတယ်...
အဆိုပါလစ်ဗျားကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းမျိူးစိတ်များဟာ အာရှတိုက်မှရွေ့ ပြောင်းရောက်၇ှိလာ
သည့် တစ်ခြားမျိူးစိတ်များလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်....အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အဖရေးရှ ရုပ်
ကြွင်းနှင့် အဖရိုတာစီးယပ် ရုပ်ကြွင်းများဟာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆက်စပ်မှုသိပ်ရှိပုံမပေါ်လို့ ပဲဖြစ်
ကွဲပြားခြားနားစွာ ဆင့် ကဲဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မျိူးစိတ်သစ်များအုပ်စုအသစ်များဖြစ်ပေါ်
မှုကြောင့် ထိုဖြစ်ရပ်များအားသုတေသနပြုသူပညာရှင်များအတွက်အရေးပါသည့် အခြေခံအ
အာရှဒေသမှ အဖရေးရှ နှင့် မြောက်အမေရိကဒေသမှ အဖရိုတာစီးယပ်စ် တို့ အကြားဆက်နွယ်
မှုဆိုင်ရာ အရေးပါသည့် လေ့ လာတွေ့ ရှိမှုကတော့အာရှဒေသမှ ကမ္ဘာဦးရှေးဟောင်းလူသား
မျိူးစိတ်များမည်သည့် အချိန်တွင် အာဖရိကဒေသသို့ ရွေ့ ပြောင်းအခြေချခဲ့ သည်ကို ဆက်စပ်
နိုင်မည့် အထူးအရေးကြီးဆုံးစံညွှန်းပင်ဖြစ်ပါတော့ တယ်...
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်အတန်ကြာကတည်းက မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိုစဉ်ကအုပ်ချူပ်သူဆရာများက ပုံတောင်
ပုံညာပရိုင်းမိတ်ဆိုပြီး ကြေငြာခဲ့ ဖူးပါသေးတယ်...
ထိုစဉ်ကတူးဖော်လေ့ လာသူများနဲ့ ယခုသတင်းထဲကအဖွဲ့ မှလူများအတူတူဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ထိုစဉ်က နိုင်ငံတကာကမြန်မာကို အဆက်အဆံမလုပ်၊ လူရာမသွင်းတာမို့ ထိုသတင်း
လည်း ပြောတိုင်းမယုံတဲ့ အုပ်စုထဲအထည့် ခံရပုံပေါ်ခဲ့ ပြီးမြုပ်သွားခဲ့ ပါတယ်...
ဒါကြောင့် မို့ လည်း သံသရာအဆက်ဆက် အမျိူးမတော်ဖူးတဲ့ လူမရှိဘူးလို့ မြတ်စွာဘုရားမိန့် 
အင်း...အာဖရိကသားများနဲ့ ဆွေမျိူးပေါက်ဖော်တဲ့ ....
The birthplace of the human race is Asia - our earliest ancestors came to Asia inahuge migration 37-38 million years ago, before they evolved into present-day apes and humans.
‘Not only does Afrasia help seal the case that anthropoids first evolved in Asia, it also tells us when our anthropoid ancestors first made their way to Africa, where they continued to evolve into apes and humans,’ says Chris Beard, Carnegie Museum of Natural History palaeontologist.
He worked with an international team that included scientists from the University of Poitiers.
‘Afrasia isagame-changer because for the first time it signals when our distant ancestors initially colonized Africa. If this ancient migration had never taken place, we wouldn’t be here talking about it.’
Paleontologists have been divided over exactly how and when early Asian anthropoids made their way from Asia to Africa.
The trip could not have been easy, becauseamore extensive version of the modern Mediterranean Sea called the Tethys Sea separated Africa from Eurasia at that time. While the discovery of Afrasia does not solve the exact route early anthropoids followed in reaching Africa, it does suggest that the colonization event occurred relatively recently, only shortly before the first anthropoid fossils are found in the African fossil record.
Myanmar’s 37-million-year-old Afrasia is remarkable in that its teeth closely resemble those of Afrotarsius libycus,aNorth African primate dating to about the same time.
The four known teeth of Afrasia were recovered after six years of sifting through tons of sediment near Nyaungpinle in central Myanmar.
Details of tooth shape in the Asian Afrasia and the North African Afrotarsius fossils indicate that these animals probably ate insects.
The size of their teeth suggests that in life these animals weighed around 3.5 ounces, roughly the size ofamodern tarsier.
‘For years we thought the African fossil record was simply bad,’ says Professor Jean-Jacques Jaeger of the University of Poitiers in France, the team leader andaCarnegie Museum research associate. ‘The fact that such similar anthropoids lived at the same time in Myanmar and Libya suggests that the gap in early African anthropoid evolution is actually real. Anthropoids didn’t arrive in Africa until right before we find their fossils in Libya.’
The search for the origin of early anthropoids—and, by extension, early human ancestors—isafocal point of modern paleoanthropology.
The discovery of Afrasia shows that one lineage of early anthropoids colonized Africa around 37–38 million years ago, but the diversity of early anthropoids known from the Libyan site that produced Afrotarsius libycus hints that the true picture was more complicated.
These other Libyan fossil anthropoids may be the descendants of one or more additional Asian colonists, because they don’t appear to be specially related to Afrasia and Afrotarsius. Fossil evidence of evolutionary divergence—whenaspecies divides to create new lineages—is critical data for researchers in evolution.
The groundbreaking discovery of the relationship between Asia’s Afrasia and North Africa’s Afrotarsius is an important benchmark for pinpointing the date at which Asian anthropoids colonized Africa.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2154753/Myanmar-fossil-turns-human-history-head--earliest-ancestors-came-Asia-Africa.html#ixzz1wzuL5nxn
Posted by peter kyaw | at 2:25 AM |
Labels: news:daily mail.co.uk
လစ်ဗျား နဲ့ မြန်မာ က အမျိုးတွေကိုး ...
ကဒါဖီ လို လူတွေ ရှိတာ ဒါကြောင့် ဖြစ်မယ် ... :)